Amaro lagu soo rogay dadka ku nool magaalada Muqdisho, | Goobsan Media Inc.
Home Somali News Amaro lagu soo rogay dadka ku nool magaalada Muqdisho,
Amaro lagu soo rogay dadka ku nool magaalada Muqdisho,
Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddiga amniga Gobolka Banaadir, kulankan ayaana ahaa mid looga arinsanayay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Guddiga amniga gobolka Banaadir ayaa ka dooday dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ka dhacay sida qaraxii shalay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday bar konatrool oo kutaala Seybiyaano.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng Cabdiraxmaan Cumar (Yariisow) oo Warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in kulanka laga soo saaray amaro lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Muqdisho.
Yariisow ayaa sheegay in marnaba Magalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska Millateriga, waxa uuna mas’uuliyiinta dowladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo mararka qaar lagu arko gudaha Magalada.
Gudoomniyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale digniin u diray milkiilayaasha gaadiidka iyo bajaajta ka howlgala Muqdisho, waxa uu ugu baaqay in gaadiidkooda diiwaan galiyaan , isagoona cadeeyay dadka iska iibiya gaadiidkooda oo u diiwaan gashan dhibaatadii lagu geestaa ay qaadi doonaan masuuliyada.
Amaradan amaanka lagu xaqiijinayo ay soo saareen guddiga amniga gobolka Banaadir ayaan la ogeyn sida uu u hir gali doono, waxaana amaradan oo kale horey u soo saartay Wasaarada amniga gudaha .
Ururada Bulshada oo walaac xoogan ka muujiyay xirnaashaha wadooyinka Muqdisho
Faahfaahin, Ciidamo Talyaani ah oo lagu qarxiyey Magaalada Muqdisho
Wararkii ugu danbeeyay Al-shabaab oo weerar Culus ku qaaday Garoonka Ballidoogle.